चुनाव हारेको विषयमा काँग्रेस युवानेताको बानेश्वरमा भेला, के भयो निर्णय ? – www.agnijwala.com
चुनाव हारेको विषयमा काँग्रेस युवानेताको बानेश्वरमा भेला, के भयो निर्णय ?
चुनाव हारेको विषयमा काँग्रेस युवाको बानेश्वरमा भेला, के भयो निर्णय ? –अग्निज्वाला डटकम
काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा आएको परिणामबारे समीक्षा गर्न सातै प्रदेशमा रणनीतिक भेला गर्ने भएको छ ।
पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको बुधबार बानेश्वरमा बसेको बैठकले पार्टीको पक्षमा सोचेजस्तो मत परिणाम नआएको भन्दै यसका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पार्टी पराजयबारे वडा समितिबाटै बहस चलाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘पार्टीको पराजयबारे वडा इकाई समितिदेखि केन्द्रीय तहका नेतासम्मले आत्मालोचना गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीले पार्टीले निर्वाचनमा ल्याएको नतिजाबारे महासमितिको बैठक बोलाएर छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘काँग्रेसले निर्वाचन हारे पनि मुद्दामा भने जितेको छ’, उनले भनिन् ।
страницыboitohandbookwordpressмужская обувь ботинкиэкскурсии выходного дня